Wararka - Sida loo habeeyo Silsiladda Haydarooliga
Sida loo habeeyo Silsiladda Haydarooliga
Dhululubo Haydarooliga, dhab ahaan, waa qayb muhiim ah oo ka mid ah qalabka farsamada. Waa inay buuxisaa shuruudaha riixitaanka, istaroogga, booska rakibida iyo cabirka rakibida qalabka oo dhan. Qaab dhismeedka is haysta ee gaarka ah ee mashiinada dhismaha, xadka dhululubadu waa mid aad u adag.
Kadib go'aaminta riixitaanka (xoog jiidaha), istaroogga, xawaaraha dhaqdhaqaaqa iyo qaabka rakibaadda ee silsiladda saliida, cadaadiska la qiimeeyay iyo heerka socodka ee bamka saliida ugu weyn, cadaadiska iyo riixitaanka dhululubo saliida ayaa la go'aamiyaa, iyo dhexroorka gudaha ee dhululubo saliid ah ayaa la go'aamiyaa. Xawaaraha iyo dhexroorka gudaha ee silsiladda saliida ayaa go'aamisa heerka socodka ee bamka saliidda.
Haddii aad ogtahay dhexroorka gudaha, cadaadiska shaqada, istaroogga iyo qaabka isku xirnaanta silsiladda saliidda, waxaad dooran kartaa nooca. Waxaa jira halbeegyo qaran oo loogu talagalay silsiladda saliidda, moodeelka sida caadiga ah loo isticmaalo waxaa lagu magacaabaa heerka silsiladda.
Tusaale ahaan, Marka loo eego riixitaanka 4 tan, waxaa lagu xisaabin karaa in haddii cadaadiska Bai ee dhululubada saliidda loo qoondeeyay inuu ahaado 8Mpa, dhexroorka gudaha ee silsiladda saliidda waa 80, iyo nooca silsiladda saliidda waa 80 * 40 * 300-8mpa. Mashiinka nooca usha waxaa loo isticmaali karaa qiimo jaban iyo dayactir ku haboon.Haddii cadaadiska shaqada ee dhululubada saliidu ay tahay 16MPa, dhexroorka hoose ee silsiladda saliida waa 60, iyo qaabka saliida dhululubadu waa 60 * 35 * 300-16mpa , iyo nooca alxanka ama nooca ul jiidaya ayaa loo isticmaali karaa.Waxaa lagugula talinayaa inaad isku darto cadaadiska nidaamka qalabka farsamada si aad u go'aamiso cadaadiska shaqada ee silsiladda saliida marka hore. Haddii qalabka mashiinka la dhammeeyo, cadaadiska nidaamka waa inuu ka hooseeyaa, badiyaa ka yar yahay 5MPa. Haddii qalabka farsamada uu yahay mid si qalafsan loo farsameeyay, cadaadiska nidaamka waa inuu ka sareeyaa
Si kastaba ha noqotee, heerarka shidaalka saliida ayaa badan oo khalkhal leh, oo ay ku jiraan heerarka qaranka, heerarka Wasaaradda mashiinada, iyo heerarka warshadaha kala duwan Fuustada dhululubo, shaabadaynta, isku xirka iyo hababka tijaabada ee dhululubo saliidda waxay leeyihiin heerar u gaar ah. Habka ugu fiican ayaa ah sawir qaadista warshad.